बागलुङ नगरपालिकाको करको दायरा : के के मा लगायो कति कति कर ? धेरै निशुल्क, थोरै संयोजन !::Online News Portal from State No. 4
गतबर्षभन्दा यो बर्ष सवैमा कम
बागलुङ, ७ भदौ – स्थानिय सरकारले जथाभावी रुपमा करको दायरा बढाएको गुनासो आएपछि बागलुङ नगरपालिकाले आफ्नो करको दायरा विहिवार सार्वजानिक गरेको छ । नगरपालिकाबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रदान गरिने सेवालाई जनसरोकारसंग प्रत्यक्ष समबन्ध राख्ने अधिकांश सेवालाई निःशुल्क गरेको छ ।
नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सिफारिशहरु जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, वसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद दर्ता, मृत्यु दर्ता, निशुल्क उपचार सिफारिश, स्वास्थ्य समबन्धि सिफारिश, नक्सापास सर्जिमन, वडा मुचुल्का, निवेदन दर्ता, छात्रवृति सिफारिश, फरक क्षमता भएकाहरुको सिफारिश पूर्णरुपमा निःशुल्क गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नगरसभाको निणय अनुसार प्राकृतिक प्रकोप समबन्धित सिफारिश, वडा कार्यालयबाट नगरपालिकामा जाने सम्पूर्ण सिफारिश, घरकोठा खाली गराउने सिफारिश, आर्थिक सहायता तथा योजना माग समबन्धित सम्पूर्ण सिफारिश पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने प्रमुश प्रशासकीय अधिकृत भीम वहादुर कुवँरले वताए ।
ग्रामिण क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्यवस्तु, फेन्सी पसल तथा होटल ब्यवसायमा करका दरमा ३६ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ब्यक्तिले ब्यीिक्तलाई दिने घर वहाल कर बार्षिक ६ प्रतिशत मात्र र ब्यक्तिले नगरभित्रका संघसंस्था र कार्यालयलाई दिईने घर वहाल करमा १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो कर गत आर्थिक बर्षको भन्दा कम हो ।
नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा लिएको भन्दा यो बर्ष सवैमा करको दर घटाएको छ । चालु यो बर्षमा नगरपालिकाले सवैभन्दा बढि कर बस ट्रक विक्रेता रु. १० हजार लिने छ, जुन गतवर्षको भन्दा २ हजार कम हो । गत वर्ष यी ब्यापारीहरुबाट रु. १२ हजार लिएको छ । दोस्रो वढि अफसेट प्रेसबाट रु. ७ हजार लिनेछ, जुन गतबर्षको भन्दा ३ हजार कमी हो । गतवर्ष अफसेट प्रेसबाट रु. १० हजार लिएको थियो ।
त्यसैगरी यसबर्ष मासुजन्य ब्यापार गर्ने ब्यवसायी बंगुर मासु पसल, खशीको बोका मासु पसल, रागा मासु पसल, कुखुरा मासु पसलहरुबाट रु. २ हजार लिनेछ । गतवर्ष यी पसलबाट रु. ३ हजार लिएको थियो । सिलाई केन्द्र, कपास रिसाईक्लिन, कपडा तथा छाला जुता मर्मत सेन्टरबाट रु. १५ सय मात्रै लिने छ । यी ब्यवसायीहरुबाट गतवर्ष रु. २ हजार र रु. २५ सय लिएको थियो ।
हेयर कटिङ, सानो पोल्टी फर्म, गाईभैसी फर्मबाट रु. १ हजार लिने नगरपालिकाले जनाएको छ । ठूलो पोल्टी फर्मबाट भने रु. २ हजार लिनेछ । नागरिकसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवामा गतवर्षभन्दा यसवर्ष सवैमा कमी गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले वताए ।